ကလေးများနဲ့ စမတ်ဖုန်းအန္တရာယ် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home ဗဟုသုတ ကလေးများနဲ့ စမတ်ဖုန်းအန္တရာယ်
Anonymous at 10:03:00 AM ဗဟုသုတ,
တစ်နေ့မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူ့သမီးလေးအကြောင်းကို ပြောလာ ပါတယ်။ သူ့သမီးလေးက အသက် ၃ နှစ်ပြည့်ခါနီးပေါ့။ ကလေးရဲ့ အကြည့်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာကို သတိထားမိလို့ သေချာကြည့်တော့ ကလေး က ညာဘက်မျက်လုံး ခပ်စွေစွေဖြစ်နေတယ်။ ကလေးက မွေးတုန်းက မျက်လုံးကအတည့်ပဲ၊ အခုလည်း အဝေးကိုကြည့်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ အနီးကို ကြည့်တဲ့အခါ ခပ်စွေစွေဖြစ်နေတယ်။ သူလည်း အရမ်းစိတ်ပူသွား တာနဲ့ မေတ္တာဦးမှာ သွားပြပြီး အထပ်ထပ်အခါခါ စစ်ဆေးတော့မှ သိရတာက ကလေးက အနီးကိုကြည့်တဲ့အခါ အာရုံစိုက်မှု အရမ်းများနေတယ်၊ မျက်မှန်တပ်ပြီး သူငယ်အိမ်ကို တည့်ပေးရမယ်၊ အနီးအဝေးကို ပါဝါနဲ့တပ်ရပါမယ်၊ ရေချိုးချိန်နဲ့အိပ်ချိန်ပဲ ချွတ်ပါ၊ ၇ နှစ် ၈နှစ်လောက်အထိတပ်ရင် ပျောက်ကင်းမယ်၊ ဒီလိုသာမဟုတ်ရင် အသက်ကြီးတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်က အရာဝတ္တုတွေ လူတွေကို ရုပ်လုံးကြွမမြင်ပဲ TV ကြည့်သလို အပြားလိုက်ပဲမြင်နိုင်တော့ တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။
မွေးကင်းစမှ ၇-၈ နှစ်အထိ ကလေးတွေဟာ အရောင်တွေအပေါ်မှာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတတ်တာကြောင့် ဖျတ်ခနဲဖျတ်ခနဲ အရောင်တွေ မြင်ကွင်းတွေပြောင်းသွားတတ်တဲ့ smart ဖုန်းတွေ၊ Tabelt တွေ၊ computer ၊ TV စတာတွေကို အာရုံအရမ်းစိုက်ပြီး ကြည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုဟာ အရမ်းကိုမြင့်မား တဲ့အတွက် တစ်ခုခုကိုကြည့်ရင် မျက်တောင်မခတ် တမ်းစူးစိုက်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အမြင်အာရုံ ထိခိုက်စေတော့တာပါပဲ။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် နားကြပ်နဲ့ပါ တပ်ပြီး သီချင်းတွေကို ကြည့်ရှုနားထောင် တတ်တာမို့ နုနယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ အမြင်အာရုံသာမက အကြားအာရုံပါထိခိုက်နို်င်ပါတယ်။
မြို့ပြနေမိသားစုတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါ ၁ နှစ်အရွယ်ကလေး ၃ပုံ၁ပုံ ခန့်ဟာ ဖုန်းကိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲ တတ်နေကြပါပြီ၊။ အသက် ၂နှစ်အရွယ်တွေကတော့ ဖုန်းခေါ်တာ၊ သီချင်းကြည့်တာ၊ ဂိမ်းအလွယ်လေးတွေ ဆော့တာအထိပါ လုပ်နိုင်နေကြပြီး တစ်ခါသုံးမိရင် နာရီပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိ စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကလေးဟာ ဖုန်းကိုစွဲလမ်းသွားပြီး မဆော့ရရင် ဂျီကျငိုယိုတဲ့အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးဖြစ်စေ လူကြီးဖြစ်စေ သေးငယ်တဲ့ screen ပေါ်မှာ အာရုံစိုက်တာများလွန်းရင် ဇက်ကြောတက်၊ ခေါင်းကိုက်ပြီး မျက်စိကိုက် မျက်စိမှုန်တတ်ကြတာပါပဲ။
ဖုန်းကိုအာရုံစိုက်နေသူတစ်ယောက်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နေဟန်ဟာ ကိုင်းနေပြီးမလှုပ်မယှက်နဲ့ ကျန်းမာတဲ့ပုံစံမျိုး မဟုတ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေဟာ ညောင်းညာ တာ ခေါင်းကိုက်တာကို လူကြီးလိုမပြောတတ်ပေမဲ့ မျက်လုံးကို ခဏခဏ ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်တာ၊ တခုခုကိုကြည့်ရင်းမျက်လုံးက အတွင်းထောင့်ကိုကပ်လာတာတွေဟာ အန္တရာယ် လက္ခဏာတွေပါပဲ။ အခုချိန်မှာ သင့်ကလေးဟာ ဖုန်းကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းသုံးချိန်နည်းသမျှ နည်းအောင် အာရုံပြောင်းပေးလိုက်ကြပါ၊ မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့ မုန်လာဥနီဖျော်ရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် စတာတွေအပြင် ငါးကြီးဆီပါ တိုက်ကျွေးပြီး ကလေးရဲ့အမြင်အာရုံကို အမြန်ဆုံးထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြပါလို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
Photo - quibly
Win Pa Pa San @စံဝန်းနီ (ရိုးရာလေး)
KENBO KB P7800 Miracle Backup Firmware
ကိုယ့် Gmail မဆုံးရှုံးအောင် သိထားရမယ့် အချက် ၉ ချက်
Blogမှာ Christmas Bell လေးထည့်ကြမယ်
သင့်ကိုသင် မေးဖို့ မေးခွန်း ၁၀၀? (ဗဟုသုတ)
အသုံးမပြုတော့တဲ့ Google Account ကို ဘယ်လိုဖျက်မလဲ
SP Flash Tool Latest Version v5.16.44
ဗာဒံစေ့ဗန်ဒါပင်(ဗန်ဒါသီး) နဲ့ ကျန်းမာရေး
ထမင်းစားပြီး မလုပ်သင့်သည့် (၇) ချက်
ကျောင်းမှာ သင်ယူခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ (၁၆)ခု
သင် အသက်(၂၀မှ ၂၈ )အတွင်း ဆိုရင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ
Xiaomi MIUI 8 တွင်ပါဝင်သော Dual App နှင့် Second S...
ဘ၀အတွက် စည်းကမ်း (၇) ချက် (ဗဟုသုတ)
အမျိုးသမီးတိုင်း မှီဝဲသင့်သည့် အဟာရဓာတ် (၁၀) မျိုး
အောင်မြင်ခြင်း (၁၁) ဗျူဟာ
မိမိဘလော့မှာLike Box ကိုဧည့်သည်များမြင်သာအောင်သေးေ...
﻿ဖုန်း ဘက်ထရီ သက်တမ်း ရှည်ကြာစေဖို့ မှန်ကန်တဲ့ အား...
USB OTG ဆိုတာဘာလဲ . . . ? ဘယ်လို အသုံးဝင်တာလဲ . . . ?
Android Nougat 7.0 ထိ Root တစ်ချက်တည်း ပေါက်နိုင်တ...
မိမိရဲ့ဘလောမှာ့Highlight Author Commentလုပ်ချင်ရင်
မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသိထားသင့်သည့် အချို့ သောအရာ...
Redmi Note3MTK Sp flashtool firmware အလွယ်ဆုံးရေ...